I-Android 101: ungayitshintsha njani into eshukumayo okanye iphepha lodonga
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Android 101: Ungayitshintsha njani into eshukumayo okanye emileyo iphepha lodonga
Ayizizo zonke iingcali xa kuziwa kwi-Android, kwaye xa wena & apos usitsha kwinto ethile, kwanezona zinto zilula kakhulu zinokuziva zilucelomngeni ngakumbi kunokuba kufanelekile. Ukutshintsha iphepha lodonga kwisixhobo sakho se-Android- ukusebenza ngokulula-kunokuba yinto abanye bethu abafuna uncedo ngayo.
Endaweni yokumane ucengceleze amanyathelo ukuze ufumane le nto uyikhangelayo (ukuba awungxamanga, tsiba uye kwisilayidi esingezantsi), mhlawumbi lixesha elilungileyo lokufunda ngakumbi ngesixhobo sakho kwaye yintoni isiqalisi se-Android 'kunjalo. Ngokusisiseko, umthumeli wakho sisicelo esikunika isikrini sasekhaya, idrowa yakho yohlelo lokusebenza, kunye nemenyu yakho yoseto-ukusuka kwindlela abasebenza ngayo, ukuya kuthi ga kwindlela abajongeka ngayo. Bonke abavelisi abaphambili banee-launcher zabo kwizixhobo zabo (Oko kukuthi, bahlukile kubaphehli bempahla ababonelelwe ngee & apos; stock 'Android ephuhliswe nguGoogle - yona & apos; iguquliwe), kwaye yiyo loo nto & kutheni iiapos zinezixhobo zeSamsung ujongano olwahluke ngokupheleleyo kunolo lwe-HTC.
Ungayiseta njani iphepha lokuskrola kwi-Android
Njengoko unokuthelekelela, abaqalisi nabo bayalela indlela ephathwa ngayo amaphephadonga. Ezinye iziqalisi, ezinjengezo zikwi-LG G3 kunye ne-Sony Xperia Z3, zikuvumela ukuba ungatshintshi iphepha lodonga nje kuphela, kodwa ukwenze ukuskrola. Ngamanye amagama, umfanekiso ongemva uya kuhamba xa uswayipha ngasekhohlo okanye ngasekunene kwizikrini zakho zasekhaya (leyo wena neapos yakho siyazisiweyo xa uvula isixhobo). Sisiphumo esipholileyo, kodwa ayizizo zonke iizindululi eziyixhasayo- umzekelo, awunakufumana iphepha lodonga elikhutshiweyo kwi-HTC One M8 yakho okanye kwi-Samsung Galaxy S5. Ukuba ungokwenenebemba ukuskrola amaphephadonga, nangona kunjalo, unokukhuphela ngokulula isixhobo sokuqalisa somntu wesithathu kwiGoogle Play Store imizekelo embalwa efanelekileyo inokufunyanwa apha .
Oko kugqiba isifundo sethu esikhawulezileyo kwizindululi ze-Android. Ngaba usafuna ukutshintsha iphepha lodonga lakho? Intloko ngqo kwigalari, emva koko!
I-Android 101: Utshintsha njani ukuskrola okanye iphepha lodonga
ezona meko ze-iphone 6s zilunge kakhulu
bhala kwi-pdf samsung inqaku 8
Uhlala uyibiza kangaphi ifowuni yakho?
Iziphumo zovavanyo lwebhetri yeLG V20 ziphuma: nantsi indlela ekuthelekiswa ngayo xa kuthelekiswa neApple kunye neapos s iPhone 7 Plus kunye ne-Samsung kunye neapos; s Galaxy S7 Edge